Kwete-kuomesa Extrusion Compound Fertilizer Kugadzira Line - YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Tine ruzivo rwakakwana mune isina kuoma extrusion granulation yekugadzira mutsara. Isu hatisi kungo tarisa pane ese maitiro ekubatanidza mune yekugadzira maitiro, asi zvakare gara uchinzwisisa maitiro enzira yega yega yekugadzira tambo uye kubudirira kuwana interlinking. Iyo yakazara yekugadzira maitiro ndeimwe yemabhenefiti makuru ekushandira pamwe kwako neIzheng Heavy Machinery Co, Ltd Isu tinopa yakagadziriswa yekugadzira tambo mhinduro maererano nezvinodiwa chaizvo nevatengi.
Runhare: + 86-18621801335
Kwete-kuomesa Extrusion Compound Fertilizer Kugadzira Line inogona kuburitsa yakakwira, yepakati uye yakaderera yevasungwa mukomputa fetiraiza yezvirimwa zvakasiyana Iyo yekugadzira tambo haidi kuti iome, iine diki yekudyara uye yakaderera simba rekushandisa
Iyo roller isina kuomesa extruding granulation inogona kuve yakagadzirirwa kuita zvidimbu zvemhando dzakasiyana uye saizi uye inogona kudhonzwa kuti ibudise saizi dzakasiyana.
Kazhinji kutaura, fetiraiza yemubatanidzwa ine maviri kana matatu zvinovaka muviri (nitrogen, phosphorus, potasium). Iine hunhu hwehuwandu hwemuviri yezvakanaka uye mashoma mhedzisiro. Fetereza yemubatanidzwa inoita basa rakakosha mukudyara kwakaringana. Izvo hazvigone chete kugadzirisa kuvandudza kushanda, asi zvakare kusimudzira yakagadzikana uye yakakwira goho rezvirimwa.
Mbishi zvigadzirwa zvinowanikwa kune organic fetiraiza kugadzirwa
Mbishi zvigadzirwa zvekugadzira fetereza kugadzirwa zvinosanganisira urea, ammonium chloride, ammonium sulphate, liquid ammonia, ammonium monophosphate, diammonium phosphate, potasium chloride, potasium sulphate, kusanganisira imwe ivhu uye zvimwe zvinozadza.
1) Nitrogen mafetiraiza: ammonium chloride, ammonium sulfate, ammonium thio, urea, calcium nitrate, nezvimwe.
2) Potassium fetiraiza: potasium sulphate, huswa uye madota, nezvimwe.
3) Phosphorus fetiraiza: calcium perphosphate, inorema calcium perphosphate, calcium magnesium uye phosphate fetiraiza, phosphate ore upfu, nezvimwe.
Kugadzira mutsetse kuyerera chati
Isu tinopa yakakwana seti isina kuoma extrusion granulation yekugadzira mitsara iyo isingade kuomeswa. Iyo yekugadzira tambo michina inonyanya kusanganisira chisanganiso uye diski feeder, roller extrusion granulation muchina, roller roller sieve muchina, bhandi conveyor, otomatiki ekuputira muchina uye zvimwe zvekubatsira michina.
Seunyanzvi hwokugadzira fetiraiza yekugadzira tambo michina, isu tinopa vatengi zvigadzirwa zvekugadzira uye mhinduro dzakakodzera kwazvo dzakasiyana dzakasiyana dzekugona kugona senge matani zviuru gumi pagore kusvika kumatoni mazana maviri ezviuru pagore.
1. Mechiniki yekumanikidza granulation inoshandiswa pasina kupisa kana humidifying mbishi zvigadzirwa.
2. Inokodzera zvigadzirwa zvinopisa zvine mutsindo, zvakaita seammonium bicarbonate
3. Hapana chikonzero chekuomesa maitiro, nekudyara kushoma uye kushomeka kwesimba kushandiswa.
4. Hapana mvura yakasviba, pedza gasi kuburitsa, hapana kusvibiswa kwenzvimbo.
5. Iko kugoverwa kwehukuru hweyakaenzana yunifomu, uye hapana kusarura uye kusangana.
6.Yakakwana dhizaini, yemhando yepamusoro tekinoroji, kugadzikana kushanda uye nyore kugadzirisa.
7. Nyore kushanda, nyore kuziva otomatiki kutonga, uye kugadzirisa kugadzirwa kushanda.
8. Kune huwandu hwakawanda hwezvinhu zvakasvibirira zvinoshandiswa pasina chakakosha mashandiro anoita.
Iyo isina kuoma extrusion granulator inosanganisira otomatiki zvigadzirwa, mabhandi anotakura, biaxial mixers, disc feeders, extrusion granulation michina, roller masefa, akapedza matura, otomatiki mapakeji michina, nezvimwe.
Iyo otomatiki yezvigadzirwa muchina unofudza iyo mbishi zvinoenderana nechero fomula muyero, iyo inogona otomatiki kupedzisa iyo batching maitiro neakanyanya kurongeka uye kugona, kuitira kuti uve nechokwadi chemhando yefetiraiza. Mushure mezvakagadzirwa, izvo zvinhu zvinoendeswa kune iyo mbiri-axis blender.
2. Double Shaft Fertilizer Chisanganiso
Dhisiki chisanganiso inoshandisa cycloid tsono vhiri rinodzora kutyaira chokurukisa, uyezve tyaira rinosimudza ruoko kutenderera nekumhanyisa. Iine inoenderera ichienda pafiripi uye ichisimudza emachira paruoko rwunosanganisa, izvo zvigadzirwa zvakavhenganiswa zvizere. Izvo zvakasanganiswa zvinhu zvinoburitswa kubva kuburitsa pazasi. Iyo diski inotora polypropylene ndiro kana isina simbi lining, izvo zvisiri nyore kunamatira uye yakapusa uye inoshanda.
Iyo yakasanganiswa mbishi zvinhu zvinotakurwa kubva kubhandi rekutakura kuenda kune disc feeder, iyo zvakaenzana inotumira izvo zvinhu kune ina roller roller extruder pasi peiyo feeder kuburikidza ne hopper. Muchina unosvina zvinhu kuita zvidimbu kuita kamuri yakaputsika pasi pechidzitiro kuburikidza neyakajairika inotenderera yakakwira-voltage roller, uyezve yozopatsanura zvidimbu zvinodiwa seyemberi-axis mhumhi zino tsvimbo inotenderera. Iyo roller inogadzirwa neiyo nyowani-isingagadzike, inopfeka-isingagadzike uye inopesana neyakagadzikana alloy zvinhu.
Yakawedzerwa granulation particles inoendeswa kune yakasungirirwa firita kuburikidza nebhandi rinotakura, uye zvidimbu zvisina mwero zvinoyerera zvichibuda muhombe hombe kuburitsa padivi nepaburi rehwindo, uye ndokuzoendeswa kudisco feeder kune yechipiri granulation, uye anokwanisa ma particles anodyiswa kubva ku yakadzika yekupedzisira nzira yekutakura uye kuendeswa kunzvimbo yakapera.
5.Magetsi Ehuwandu Kupakata
Kuburikidza neiyo hopper, inokwanirisa zvidimbu zvinoyerwa zvakaenzana, zvobva zvapetwa ne otomatiki yekupakata muchina.